MUDANE RIYAALE OO KA WAR BIXIYEY SARKIISII UU BARYAHAA KU MAQNAA MARKII UU KU SOO LABTAY DALKA | Toggaherer's Weblog
MUDANE RIYAALE OO KA WAR BIXIYEY SARKIISII UU BARYAHAA KU MAQNAA MARKII UU KU SOO LABTAY DALKA
Posted by: toggaherer on: March 17, 2009
Weftigii uu hoggaaminayey Madaxweynaha Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin, ayaa galabta ka soo degay madaarka caalamiga ah ee Hargaysa International Airport.
Madaxweyne Rayaale iyo weftigiisa waxa garoonka ku soo dhaweeyey oo kaga hortagay Madaxweyne-ku-xigeenka Md. Axmed Yuusuf Yaasiin, wasiiro tiro badan iyo dadweyne kale.
Madaxweyne Rayaale oo markii uu soo gaadhay qasriga Madaxtooyada hadal kooban siiyey warbaahinta waxa uu ku macneeyey safarkiisii mid guul ku soo dhammaaday, isla markaana madaxdii uu la kulamay ee dalalka Ingiriiska, Itoobiya iyo Jabuuti oo markii uu soo noqday masuuliyiintooda ay is arkeen intaba isafgarad iyo niyad wanaagsan ku kala yimaadeen.
“Waxaan ugu baxay safar dalka Ingiriiska ah oo uu nagu martiqaaday Xoghayaha Arrimaha Dibada ee dalkaasi, waxaannu sii marnay Jabuuti oo aannu madaxda Jabuuti yeelanay kulan salaaneed, Itoobiya waanu sii dhaafnay, kadibna Ingiriiska ayaanu tagnay sidii aannu ku ballansanayn ayaanu isu aragnay Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Ingiriiska. Waa markii ugu horreysay ee aannu la kulano Xogyaha Arrimaha Dibada inta badan waxaanu la kulmi jirnay Wasiirka Afrika u qaabilsan.
Run ahaatii arrimaha aannu ka wadahadalnay waxa ka mid ahaa kow dhaqaalaha siday wax inooga tarayaan, xagga amniga waxay inaga tarayaan iyo xagga siyaasadda waxay inaga tarayaan. Ujeedada ugu weynina waxay ahayd awal warbixin ayaa loo geyn jiraye in aannu si toos ah isku aragno, runtii qadiyadeenii si fiican baanu u gudbinay, ballankayaguna waxa weeye in Ingiriisku qadiyadeena dib u qiimayn doonaan, doorashadaa soo socotaana wax badan adduunka ka beddeli doonto xaaladeena,” ayuu yidhi Madaxweyne Rayaale.
Madaxweynuhu waxa kale oo uu sheegay inuu ka hadlay Aqalka Mudanayaasha Wakiillada oo ah buu yidhi meel dadka siyaasiyiinta ah marmar loo ogolaado, isla markaana uu halkaa ka gudbiyey qadiyada Somaliland.
Md. Rayaale waxa uu xusay in wadahadalo uu la soo yeeshay masuuliyiinta labada dal ee Itoobiya iyo Jabuuti uu isafgarad wanaagsan dhexmaray, isla markaana ay arrintaasi ka mid tahay dhaqdhaqaaqa xukuumaddu ugu jirto ictiraafka dalka Somaliland.
Su’aal: madaxweyne, waxa jirta mudadii shanta sanadood ahayd ee lagu doortay iyo muddadii sanadka ahayd ee golaha guurtidu kuu kordhiyeen wax dagaal ah dalka kamay dhicin, markaa ma ka raaligelinaysaa shacbiga Somaliland mudadaasi labada jeer ah ee doorashadii madaxtooyada aanad ku qaban?
Jawaab: Horta, waxaan ku weydiin lahaa marka u horaysa sharciga Somaliland ma taqaanaa, adigoo suxufi ah ma akhrisataa, dawlad mee ka baxaysaa ma jirto ilaa doorasho ay timaado.
Aniguna wakhti ii kordhiya maan odhan duruuf baa keentay, shacbiga Somaliland-na kiis iima haystaan.
Xeerarka dalka u yaalla ayaa la raacayaa, anigu haddii aan joogo iyo dabaday haddii ay qaar kale yimaadaan oo doorasho qabsoomi weydo, nidaamka iyo xeerarka dalka u yaalla ayaa la marayaa.
Su’aal: Mudane madaxweyne in badan baad safaro dibada ah aad ka timaadeen waxaad hore u sheegteen in aqoonsigii Somaliland inuu in yar soo jiro markaa halka uu marayo bal faahfaahin naga sii?
Jawaab: Horta aqoonsigii wax gidaaryaala oo laga soo qaadayo ma aha, dadaal weeye wuu socdaa dadaalku, waxaan sheegayaa maalintii aan bilaabay iyo maanta inuu maalinba maalinta ka dambaysa uu ka soo dhow yahay ayaan kuu sheegayaa.
Su’aal: Xisbiga Kulmiye wuxuu ku doodayaa in marka la gaadho 6-da bisha April 2009, haddii doorasho ku qabsoomi weydo in golayaasha baarlamaanka loo gudbiyo oo wada tashi la iskugu yimaado arrintaas sideed u aragtaa?
Jawaab: Xaggee ayay ku qoran tahay, anigu xeerka in la raaco ayuun aan aamisan nahay Kulmiye waa inuu xeerka raacaa, xeerarka waxaynu u samaysanay in aynaan murmin oo nin waliba ku qasbanaado inuu xeerka raaco.
Su’aal: Waxa jiray dhaqdhaqaaqyo beesha caalamku ay ku hawlanyihiin gaar ahaan iyadoo Maraykanku sheegtay in ururka Alshabaab uu khatar weyn ku hayo, dhalinyaro wadankiina ka tagaysa oo qurbaha tagaysa, ma kala soo hadashay sidii wadamada reer galbeedku aanay dadkeena halkaas joogga ugu darin, Al Shabaab arrinta budhcad baddeedana ma kala hadashay?
Jawaab: Waxaas oo dhan waa laga wada hadlaa markaan safar u baxnaba, Somalilander-ka dhibaatadaas ka qaybgala cidna uma dacwiyi karto, cidina kama saari karto, tallada aan u jeedinayo dadkeena waxa weeye in aanay waxaas ka qaybgelin oo ay ka nadiif ahaadaan.
Dadka Soomaalidu ilaa taariikhda inta la xasuusan yahay Muslim bay ahaayeen diin cusub oo imika soo degtay oo dadka la barayaa ma jirto, waxaan leeyahay diinta Islaamka waan haysanaa, diinta Islaamka in si xun loo isticmaalo waa fikrad aan wanaagsanayn.
Waanu ka wada hadalnay arrintan laakiin waxaa aamisan nahay berrigii hore waxa la odhan jiray halkan ayay ka tagaan, waan kala hadlaa wadamadaasi waxaanan ku idhi awal waxaad odhan jirteen wadamadiina ayaad ka yimaadaan, laakiin imika reer galbeedka ayay ka yimaadeen dadka isqarxiyaa.
Su’aal: Madaxweyne waxaad tahay madaxweynihii u horeeyay ee la soo doorto isla markaana dalka gaadhsiiyay saddexdii doorasho ee dalka laga qabtay, adigoo ilaashanaya taariikhdaasi waxa jira dadka qaar ka cabsi qaba dib u dhaca doorashada, ma soo bandhigaysaa hindise tanaasul leh oo lagu furdaamiyo xaalada dalka Maanta ka taagan?
Jawaab: Waxba kama taagnaa, waa kooxo yaryar waxa durbaanka tumaya dalkana dhibaato ma haysato, sharcigeena waxa ku qoran dawlada jirta dawlad la doorto ayaa bedelaysa. Ninka diidan nidaamka ummadani dhigatay, durbaanka uu tumayo lama dadku ma maqlayo, dadkani way ka soo daaleen durbaan loo tumo in la didiyo way ka soo daaleen.